Qorniinku sidoo kale wuxuu astaamihiisa shakhsiga u yahay Ruuxa Quduuska ah oo markaa ka dib kor u qaada muuqaalka Ruuxa ee wixii ka sii hooseeya shaqadiisa. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay dardaaran (1 Korintos 12,11: "Laakiin waxaas oo dhammi waa isku mid, waxayna siisaa qof walba waxay doonayaan"). Ruuxa Quduuska ahi wuxuu baaraa, ogaadaa, baraa oo kala saaraa (1 Korintos 2,10: 13).
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu leeyahay shucuur. Ruuxa nimcada waa la caajin karaa (Cibraaniyada 10,29) iyo murugo (Efesos 4,30). Ruuxa Quduuska ahi wuu na qalbi qaboojiyey oo sidii Ciise oo kale ayaa loo yeedhay caawiye (Yooxanaa 14,16). Qoraallada kale ee Qorniinka, Ruuxa Quduuska ahi wuu hadlayaa, amarradiisa, marag furayaa, been ayuu u leeyahay, galayaa, ku dadaalayaa, iwm ... Dhamaan ereyadan waxay la jaan qaadayaan shakhsiyadda.
Baybalku wuxuu sifooyinka rabaani ah ugu sheegayaa Ruuxa Quduuska ah. Looma sharaxay inuu leeyahay malaa'ig ama dabeecadda aadanaha. Ayuub 33,4 wuxuu xusayaa: "Ruuxa Ilaah waa i abuuray, Oo neefta Ilaaha Qaadirka ah ayaa i noolaynaya." Ruuxa Quduuska ah ayaa abuuraya. Maskaxdu waa waara (Cibraaniyada 9,14). Waa goobjoog (Sabuurradii 139,7).